Kulan taageero ah oo lagu qabtay Baydhabo – Radio Muqdisho
Kulankan ay maanta wada yeesheen Xildhibaanada ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya iyo Haweenka ku nool sideeda xaafadood ee magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay ayaa waxaa uu ku saabsanaa sidii Haweenka ku nool magaaladaasi ay ula shaqeyn lahaayeen maamulka Koofur galbeed Soomaaliya.
Kulanka oo lagu qabtay gudaha magaalada Baydhabo ayaa ugu horeyntii waxaa ka hadlay guddoomiyaha Ururka Haweenka ee gobolka Baay Muraayo Aadan Maddeer, waxayna u mahadcelisay Xildhibaanada ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya sida ay ugu qeyb qaateen dhismaha maamulka Koonfur galbeed iyo dulqaadkii ay muujiyeen intii ay howshaasi ku guda jireen.
Xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo ka tirsan Baarlamaanka Soomaaliya ayaa kulanka ka sheegay in uu ku faraxsan yahay kulanka ay la yeesheen Haweenka gobolka Baay, waxaana uu ku amaanay sida markasta ay u garab taagan yihiin maamulka Koonfur galbeed Soomaaliya.
Geba gebadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay Xildhibaan Ibraahim Isxaaq Yarow waxaana uu dhankiisa amaan u jeediyay Haweenka gobolka Baay waxaana uu balan qaaday in hadii ay yihiin Xildhibaanada ka soo jeeda deegaanada Koonfur galbeed ay la shaqeyn doonaan guud ahaan bulshada ku dhaqan gobolada maamulka Koofur galbeed.
Hay’adaha Amniga dalka oo Howlgalo Amni sugid ah ka sameeyay Muqdisho